Ozia - Wikipedia
I Ozia na Oziasa izay atao hoe koa Azaria na Azariasa dia mpanjakan' i Jodà, zanak' i Amazia (na Amaziasa) tamin' i Jekôlia, izay nanjaka nandritra ny 52 taona teo antenantenan' ny taonjato faha-8 tal. J.K. Ao amin' ny Baiboly dia voalaza fa mpitari-tafika sady mpanjaka nampiroborobo ny fanorenana izy sady nampandroso koa ny fambolena talohan' ny nahazoan' ny aretina habokana azy. Nitovitovy vaninandro iainana tamin' ny mpaminany Isaia (na Izaia) sy Hôsea (na Ôsea) ary i Amôsa (na Amôsy) izy.
Atao hoe עֻזִּיָּה /ʿUziyāh na עֲזַרְיָה /ʿAzaryāh na עֲזַרְיָהוּ /ʿAzaryāhû izy amin'ny teny hebreo fa ᾿Οζίας / Ozias na ᾿Αζαρίας / Azarias amin' ny teny grika ary Ozias na Azarias amin' ny teny latina. Ny dikan' ny anarana hebreo hoe עֻזִּיָּה (ʿUziyāh) dia "heriko i Iahveh" - fa ny hoe עֲזַרְיָה (ʿAzaryāh) na עֲזַרְיָהוּ (ʿAzaryāhû) dia "nanampy i Iahveh".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozia&oldid=1042034"
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 11:56 ity pejy ity.